Atomic elekere, ihe kachasị ezi nke mmadụ kere | Network Meteorology
Oge, awa, nkeji, na sekọnd ... onye na-elebeghị anya otu puku na oge elekere ụbọchị niile iji hụ ma ọ bịaghị n'oge ma ọ bụ n'oge maka oge ọhụhụ, iji hụ ókè ị hapụrụ iji pụọ n'ọrụ ma ọ bụ naanị iji Hụ otu oge oge gị na-aga mgbe gị na ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ gị na-a havingụ mmanya. Onwere ndị na-ebu n’ihu gaa elekere iji kpachara anya yana ndị ọzọ na-egbu oge ebe niile maka na ha anaghị ele elekere n’oge. Mana n'ezie ị jụọla onwe gị ajụjụ banyere, a ga-enwe oge ọrụ agbakọtara aka zuru oke nke na-egosipụta akara oge maka mmadụ niile?
Ee ọ dị, a na-akpọkwa ya elekere atomiki. Ọ bụ elekere na-arụ ọrụ site na iji tebulu na-eji ụda atomic ma ọ bụ ịma jijiji. Ọ bụ elekere kachasị nke mmadụ mere ruo taa. Want chọrọ ịma ka o si arụ ọrụ na etu esi eme ya? Nọgidenụ na-agụ ma mara ihe nzuzo ya niile.
1 Kedu otu elekere atọm si arụ ọrụ
2 Mgbanwe data n'ime oge
3 Mkpa nke elekere atọm
4 Anyị enwere ike ịnweta elekere atọm aka nke aka?
Kedu otu elekere atọm si arụ ọrụ
Dịka anyị kwuburu, ịmara oge n'oge ọ bụla nwere ike ịdị mkpa iji mee atụmatụ gị kwa ụbọchị ma nwee obi iru ala. Ya mere, ị ga-enwe oge elekere nke ọma iji mara oge nke ụbọchị ị bụ. Elekere nke na-ebido n’oge ma ọ bụ n’abalị abaghịrị anyị uru. Na elekere atọm nke a anaghị eme anyị n'ihi na ọ bụ nwoke kachasị zuo ezuo nke e kere eke.
Ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere igwe elekere ọdịnala ọdịnala, nke na-akwado ọrụ ya na pendulum, nke a dị iche. Nke mbụ na-arụ ọrụ na oscillation nke na-akpali usoro gia jikọtara ibe ya iji gosi akara ngosi oge niile nke na-egosi ngafe nke sekọnd, nkeji na oge. Agbanyeghị, elekere atọm na-arụ ọrụ site na ugboro ole ọdịiche dị ike nke atọm dị na mpaghara elektrọnik nke microwave.
Elekere na-eji ihe akpọrọ Maser. Ọ bụ igwe na-eji ngwa ndakwa nri maka ikuku ọkụ. Ọ bụ ezie na ọ na-ada ụda mgbagwoju anya, ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụla karịa sistemụ nwere ike ịkọwapụta akara ngosi kachasị ike ma gbanwee ha n'ime microwave fringe nke ụdị electromagnetic. Ọ dị ka ọ bụ laser.
Nke a Maser na-pumped site a redio transmitter na ugboro ole nke 0,000000001 sekọnd kwa ụbọchị. Izi ezi nke mgbapụta a dị oke mma. N'ihi nke a, mgbe redio emitter na-agakọ yana ugboro ole na ọdịiche nke radieshon nke ihe atomic element, ion ndị nọ n'ebe ahụ nwere ike ịmịcha radieshon na ọkụ ọkụ. Ihe a niile na-eme site na ikuku anwuru redio.
Mgbanwe data n'ime oge
Mgbe ion na-amịrị radieshon ma na-enwu ọkụ, sel fotoelectric na - enweta oge ahụ ọkụ ọkụ na - esite na sekit wee bido njikọta na mita. Akuko bụ mpempe akwụkwọ maka inwe ike ịdekọ ọnụọgụgụ ugboro ole ebili mmiri a tụrụ anya malitere ịmalite.
A na-enyefe data niile enwetara na tebul nke oge nke ion na-enye ọkụ na kọmputa. Ọ bụ mgbe ọrụ niile dị mkpa iji zipu ọka ahụ na ndị nnata ahụ malitere ịmalite. Ndị nnata ikpeazụ bụ ndị na-egosi anyị oge ziri ezi.
Igwe a na-eji amị radieshon ma gbaa ọkụ bụ Cesium 133. A na-eme ka isotope a dị ọkụ ka o wee nwee ike ịhapụ atọm ya na, site na ebubo eletriki ha nwere, a ga-eduzi ha site na tube na-enweghị ihe ọ bụla na mpaghara electromagnetic nke na-arụ ọrụ dị ka nzacha nke na naanị mkpụrụ atọ nke ike ha bụ nke dị mkpa nwere ike ịgafe. .
Mkpa nke elekere atọm
O doro anya na ị chela echiche ịnwe elekere atọm iji nwee ezi nkenke kachasị n'ụwa ma ghara ịdị ọdụ n'oge ọ bụla. Agbanyeghị, ọ bụ elekere ezubere maka nyocha nyere nnukwu nkọwa ya. Ọ bụghị naanị na iji oge oge nke mmeghachi omume kemịkalụ ma ọ bụ iji mepụta nnwale ebe oge bụ mgbanwe dị mkpa iji tụlee. Ọ bara ezigbo uru ịmata ọdịiche dị na ọsọ nke oge.
Ruo ugbu a, otu n'ime nyocha zuru oke na ama ama nke ejiri elekere atọm wee ziga ụgbọ elu n'akụkụ ndị ọzọ gburugburu ụwa. Ozugbo ụgbọ elu ahụ si na mmalite ha pụọ, a na-amalite elekere ma tụọ oge ọ ga-ewe iji wee bata. Nke a bụ otu esi enyocha ya mmekọrịta pụrụ iche nwere. Nnwale ọzọ bụ itinye elekere atọm n'okpuru ụlọ nke skyscraper na onye ọzọ n'elu ụlọ iji hụ ọdịiche dị n'etiti ha abụọ. Maka ụdị nnwale ndị a ịchọrọ elekere nke nwere oke nkenke.
Ka ọ dị ugbu a, a na-eji elekere atọm a emebe Satellites GPS anyị jiri anyị na ekwentị ma ọ bụ ụgbọ ala anyị. Ya mere, oge nke ngwaọrụ ndị a bụ ihe ziri ezi. Site na ihe apuru ihu, o nweghi ihe eji eme ihe nyocha, mana ndi nile n’eji ya n’ezi.
Anyị enwere ike ịnweta elekere atọm aka nke aka?
Onye na-achọghị ka nche dị ka nke a n'aka ha ịga ebe niile mara oge. Otú ọ dị, elekere atọmiki enweghị ike iru aka anyị. Ha nwere nsogbu buru ibu ma obu ya bu iji nwee ezi nkenke chọrọ ezigbo ebe obibi na oke oyi. Ọ bụ naanị na gburugburu ndị a ka a ga-emezi ihe ziri ezi banyere klọọkụ atọm.
N'aka nke ọzọ, elekere anyị nwere ike ugbu a nweta ha ziri ezi ma e mee atụmatụ na ọ gaghị enwe nnukwu nhọrọ ahịa. N'iburu ihe mejupụtara ya na ihe isi ike ya nke mmezi, ọ ga-abụ elekere na-akwụ ụgwọ dị elu ma ọ gaghị eme nkụ na ahịa ndị ahụ. Enweghi otutu olile anya nke ire nke n’eme ka mmepe nke ihe iji nweta elekere anya nke igwe.
Can nwere ike ịlele ndị mmadụ n'ụwa niile na-amaghị ihe ha ga-eji ego ha mee ma ikekwe ndị otu a dị njikere ịkwụ ụgwọ dị oke ọnụ maka ụdị elekere a nke ọma na nkwojiaka ha. Naanị ịsị na ha nwere ihe pụrụ iche ma dị iche na ndị ọzọ nwere ike ịbụ ezigbo ahịa ahịa.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ ụdị elekere dị ezigbo mkpa maka sayensị yana nke na-enyere aka ịghọta ụwa nke anyị bi na ya nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Atomic elekere
Mmiri mmiri ma ọ bụ okirikiri mmiri
Na "mbara" Pluto